Jirama : tsy mbola vita ireo milina simba eny Mandroseza | NewsMada
Jirama : tsy mbola vita ireo milina simba eny Mandroseza
Tsy misy mahafantatra ny mikasika ny famindrana ny fitantanana ny Jirama eny Mandroseza amin’ilay orinasa amerikanina Symbion power. Tsy fantatra, toraka izany, koa ny fanamboarana ireo milina efatra simba.
Tsy mazava intsony ny tohiny ! Nangingina ny delestazy fa mateti-pitranga indray ny fahatapahana ara-teknika, amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Anisan’ny mamatsy herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina (hatrany Antsirabe) ny milina eny Antanandrano. Etsy ankilany, tsy afaka mihodina araka ny tokony ho izy ny milina eny Mandroseza. Araka ny loharanom-baovao voaray, tsy mbola vita ireo milina efatra manana tanjaka 40 Mw, ka mamokatra 10 Mw avy.
Raha ny fampanantenana nataon’ny minisitera anefa, tokony ho vita ao anatin’ny iray volana ny milina iray, izany hoe, vita manontolo ao anatin’ny efa-bolana. Tsy tanteraka izany, fito volana aty aoriana.
Tsy fantatra ny fifanarahana
Manampy izany, nafindra amin’ny orinasa amerikanina Symbion power ny fitantanana ny toby eny Mandroseza. Fantatra koa fa tsy mbola mihodina ny orinasa ary tsy misy asa tena atao ny mpiasan’ny Jirama, miasa ao.
Misy ny milaza fa tsy mazava ny fifanarahana amin’ity orinasa vahiny ity. Ao anatin’izany ny faharetan’ny hitantanan’izy ireo ny orinasa sy ny fotodrafitrasa na 10 na 20 taona. Toa mitady takin’ity orinasa vahiny ity koa ny tanin’ny Jirama. Tsy mazava koa ny hamatsy ny solika gazoala hamokarana ny herinaratra.
Tsy manao fanadihadiana ara-tontolo iainana EIE
Raha ny voalaza tany am-boalohany, hamidy raikitra ny vidin’ny herinaratra vokarin’ny Symbion power amin’ny Jirama. Faritana amin’ny vola dolara izany ary tsy miova na mihen-danja na tsia ny sandam-bola Ariary miohatra aminy. Tsy nisy tohiny intsony ny raharaha taty aoriana, fa toa saron’ny eny Antanandrano. Nanome iray volana ny Jirama sy ny minisitera ny filoham-pirenena, handraisana fepetra amin’ny tabataba sy ny setroka avoakan’ny milina. Aiza tokoa ny fanadihadiana manoloana ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana (EIE) sy ny fampanarahana izany amin’ny toetr’andro (Mecie), sa tsy voakasik’izany ny orinasam-panjakana? Tsy nahenoam-peo ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Ofisim-pirenena ONE.
Raha ny loharanom-baovao voaray, nilaza ny minisiteran’ny Angovo fa hafindra toerana ny eny Antanandrano. Maromaro ny toerana voakasika, toy ny any amin’ny lalam-pirenena faharoa (RN 2), eny Talata Volonondry (akaikin’ny radio Neederland teo aloha), eny Ambohidratrimo. Tsy nofaritany mazava anefa raha ho vita ao anatin’ny iray volana ny famindrana ny fitaovana eny Antanandrano. Misy antony ny filoham-pirenena matoa nanome io fe-potoana io, izany hoe, na inona na inona fomba hatao,